Ingabe Ukusesha Ngezwi ku-Cusp of Transforming Commerce? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Januwari 24, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
The Umbukiso we-Amazon kungaba ukuthenga okungcono kakhulu engikwenzile ezinyangeni eziyi-12 ezedlule. Ngithengele umama wami, ohlala kude futhi ovame ukuba nezinkinga ngokuxhuma kweselula. Manje, angavele atshele uBonisa ukuthi angishayele futhi senza ikholi yevidiyo ngemizuzwana. Umama wayeyithanda kakhulu kangangokuba wathengela abazukulu bakhe eyodwa ukuze akwazi ukuxhumana nabo. Ngiyakwazi futhi phonsa phakathi bese ubingelela inja yami, uGambino, lapho ngingekho isikhashana. Uyangibona, akhonkothe, futhi ujwayele ukubheka ngemuva kwensiza ukuze abone ukuthi ngilingana kanjani lapho.
I-Apple Homepod ngisanda kuthengiswa njengenketho ye-premium ngesipikha esihlakaniphile nokuhlanganiswa okuqinile kwe-iOS. Futhi Ikhaya le-Google ikhambi elingabizi ngokuhlanganiswa kwe-Android. Yonke imincintiswano iyamangalisa. Ngenkathi ngingu-fanboy we-Apple, ngesaba ukuthi isiko lokulawula lika-Apple lingabalahlekisela ngempi yezwi yesikhathi eside. I-Amazon inesakhiwo esivulekile ngendlela emangalisayo namashumi we izinkulungwane zamakhono isivele itholakalela ukuxhumana nanoma iyiphi insizakalo noma idivayisi.
Uma uku-Siri futhi ubhalise ku-podcast yethu, ungacela uSiri ukuthi Dlala iMartech Interviews Podcast!
Uma uku-Google Home, ungasho Dlala iMartech Interviews Podcast yakamuva!
Okwe-Amazon, engeza Ikhono le-AnyPod bese ubuza, i-Alexa, i-Alexa, cela i-AnyPod ukuthi ubhalisele izingxoxo zeMartech.
Buyela ekuziphatheni kokuthenga… uCapgemini kucwaningwe abathengi abangaphezu kuka-5,000 XNUMX e-US, e-UK, eFrance naseJalimane ukuthola ukuthi basebenzisana kanjani namadivayisi wezwi - ikakhulukazi mayelana ukuziphatha kokuthenga. Ucwaningo oluningi luye lwasekelwa ngezingxoxo zamaqembu okugxila nabathengi abavela ezweni ngalinye, olwenziwe cishe. Ucwaningo - kanye nezingxoxo zamaqembu okugxilwe kuwo - kube nokuxubana okunempilo kwezibalo zabantu kanye nomsebenzisi / ongasebenzisi umsebenzisi.
Abasizi bezwi bazoguqula ngokuphelele ukuthi ama-brand kanye nabathengi basebenzisana kanjani. Okwenza abasizi bezwi bajabule kakhulu ukuthi balukiwe baba yingxenye yezimpilo zethu, banikela ngokulula nangokunotha kokuxhumana abathengi abangakaze babone ngaphambili. Imikhiqizo ekwazi ukusebenzisa inzuzo enkulu yabathengi ezungeze abasizi bezwi ngeke nje yakhe ubuhlobo obuseduze namakhasimende abo, kodwa izakhele amathuba abonakalayo okukhula. UMark Taylor, Chief Experience Officer, iDigital Customer Experience practice, eCapgemini
Okutholwe Ucwaningo Lomthengi ku-Voice Commerce:
Abasizi bezwi bazoguqula i-ecommerce - Abathengi bakhulisa ukuthanda okuqinile kokuxhumana nezinkampani ngabasizi bezwi. Abasebenzisi abasiza ngezwi njengamanje basebenzisa u-3% wemali esetshenzisiwe yabathengi ngabasizi bezwi, kepha lokhu kulindeleke ukuthi kukhuphuke kuye ku-18% eminyakeni emithathu ezayo, kunciphise isabelo sezitolo ezingokwenyama (45%) namawebhusayithi (37%). Ngenkathi ukusakaza umculo nokufuna imininingwane kuhlala kungukusetshenziswa okudume kakhulu kwabasizi bezwi namuhla, ngaphezulu kwengxenye yesithathu yabaphendulile (i-35%) nabo bayisebenzisile ukuthenga imikhiqizo efana nokudla, ukunakekelwa kwasekhaya nezingubo.
Abathengi baneliseka kakhulu ngomuzwa womsizi wezwi - Abathengi abasebenzisa abasizi bezwi banethemba elihle kakhulu ngamava abo, ngo-71% ​​benelisekile ngomsizi wabo wezwi. Ikakhulu, ama-52% wabathengi acaphuna ukusebenziseka kalula, amandla okwenza izinto ngaphandle kwezandla (ama-48%), kanye nokuzenzekelayo kwemisebenzi yokuthenga ejwayelekile (i-41%) njengezizathu ezinkulu zokuthi kungani bekhetha ukusebenzisa abasizi bezwi ngaphezu kwezinhlelo zokusebenza zeselula namawebhusayithi. Ukukwazi komsizi wezwi ukuqonda umsebenzisi wabo ongumuntu nakho kubalulekile; Abasebenzisi abangama-81% bafuna umsizi wezwi ukuthi aqonde amagama nezichasiso zabo.
Abasizi bezwi bazoveza izinzuzo ezibonakalayo kubathengisi nemikhiqizo - Amabhizinisi ahlinzeka ngokuhlangenwe nakho okuhle komsizi wezwi azokhiqiza ukuxhumana okuningi kwebhizinisi nokuxhumana okuhle ngomlomo. Umbiko uthole ukuthi ama-37% wabasebenzisi bomsizi wezwi bazokwabelana ngesipiliyoni esihle nabangane nomndeni, futhi ngisho nama-28% wabangewona abasebenzisi angafuna ukusebenzelana kaningi ngophawu olulandela umuzwa omuhle. Lokhu kulingana nenzuzo enkulu engaba khona yezezimali, njengoba abathengi bazimisele ukusebenzisa u-5% ngaphezulu ngomkhiqizo kulandela isipiliyoni esihle ngomsizi wezwi
Okutholwe uCapgemini ukuthi izinhlangano zezentengiselwano zidinga ukwakha uhlelo olusheshayo lokuqamba umsindo oqhutshwa yizwi Ukuhweba Okuxoxisanayo Isu.
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi zami ezihambisanayo kulokhu okuthunyelwe!
Tags: amazon alexaamazon echoumbukiso we-amazonnoma iyiphii-apula yasekhayacapgeminiingxoxogoogle ekhayaikhono le-podcastSyriaizwiukuhweba ngezwiukusesha ngezwi
Ingabe Uzolahlekelwa Umsebenzi Wakho Wokumaketha Uwenze Irobhothi?